Silsilada waddani Uurcade Qore Khadar Ibrahim
(Hadhwanaagnews) Wednesday, January 11, 2017 10:11:55
Siyaasiga dhabta ahi waa nafii hore dantiisa gaarka ah ka hormariya tan caamka ah ee
rgb(51, 51, 101);"> Sida aan taariikhda in badan ka akhriyey siyaasiga dhabta ahi ma aha mid ka kiciya dadkiisa,ee waa ka marka ay dadkiisu kacaan toosiya kuna haga jidka horumarka, tilmaama,la taliya,ee mideeya una horseeda meesha ay ku gaadhaaan jidka horumarka, walaalnimada, wadajirka. Siyaasiga dhabta ahi waa nafii hore dantiisa gaarka ah ka hormariya tan caamka ah ee bulshadiisa,waa mid ka danqada dhibta iyo hagardaamooyinka siyaasiga xumi ku hayo mujtamiciisa.hadaba waxaan maanta soo bandhigaya siyaasiga labaad ee silsiladaydan ku salaysan waddani wuxuu noqon doona xoghaya guud ee waddanimaxamed cabdilaahi uurcade.
Aniga waxa weli iga dhaadhici l’a indha adayga qaar ka mid ah Siyaasiyiin musuqmaasuq iyo maamul xumo ka geystay magaaladda hargeysaa oo ceeb iyo fadeexad baday Bilicda Caasimada Hargeysa inta ay xilka ay ka hayeen casimadda 10 sanno, kuwaas oo dhacay Hanti badan oo dadweynaha reer Somaliland lahaa, ayaa maanta Xisbi mucaarid ka dhex botorinaya oo leh Cod na siiya si dib idiinku dhacno !! xukuumaddana aflagaadiya cajiib!!.maalin walba qarankanu wuxuu daawada uurcado leh waxaanu la dagaalamayana xukuumaddan musuq maasuqeedu dhaafay xadka!!talow miyu is ilaaway xoghayo wuxuu gobolka maroodijeex ku hayay into ahaa maayir ku xigeen?!.
Reer hargeysaway garanayaan si fiican magaca uurcade!! bal dib u noqda waa Maayor Ku xigeenkii hore ee caasimadda 2002-2012, waa nin ku sofoobay into xilkaas hayay Musuqa iyo maamul xumada uu u gestay Caasimada, isago oo dhulkii danta guud ee Caasimada siiba dhulkii ay caasimadu ku balaadhatay ama ku fiday beerihii ku yaalay wixii dan guud ahaan jiray oo madax ka aha boobkooda isaga iyo Joomitiro ay ku shuraako ahaayeen waagaas!! maantana wuxu aflagaadinaya xukuumadd joojisay boobka umadda iyo wax la dhaho dan guud oo ay ka qaaday dawladda hoose ee hargeysaa !!. waxana la yaabanahay xisbiga waddani oo noocaas ka dhigtay xoghaye guud intii u dhisanaa !! waddaniyow miyaad u soo diyar garawday in hantida umadda u soo shaqo tag tid ?!! shacabku kaa diid ariintaas gurigaagana nadiifi bal horta waddaniyow inta aad cod raadinaysaan oo aad ku waalatayn heesta wadaniga dhabta allow dhawr !!!, waxaan udhanaya uurcade xukuumadda aad ka hadlayso mar wealba waa tii ka nadiifisay hargeysaa , ka xishoo taariikhdaada madow .
Wuxuuna door weyn ku laha khilaafkii burburiyay xisbigii Ucid waagi lakala baxay.waxaana la ilaawin mid ka mid ah boobkiisamar u khilaaf weyn ka aloolsana new hargeysa oo dhul cidii lahayd dhisaysay oo ku tilmaamay sharci darro, taas oo been aan sal iyo raad toona lahayn meeshuna shirci bay ahayd oo gabadh muwaadinad ah aya lahayd waana goob dhul beereed ah oo dokomentigii sharcigu u dhamaystaran yahay, sideed bilood ka horna dawlada hoose ayaa qorshaysay oo u sharciyeysay!! Markaasu yimi uurcade oo ku qabsaday gabadhaas lamana ilaawo boobkii u ku hayay reer hargeysa.hadaba cida ku sifawda inay umadda hantideeda u soo shaqa tagtay oo boobtayna waa in taariikhdooda runta ah shacabka aan ogayn loo soo bandhigaa si ay uga digtoonadaan dadkaas musuqa iyo maamul xumida ku sifoobay si ay iska ilaaliyaan, cidii wanaag iyo horumar gaadhsiisa dadkeena iyo dalkeenan waan dhiiri gelinaynaa inuu ku sii jiro saaxada siyaasadeed, kuwa xuna dhulka lala dhaco khaayimiinta ah.